यात्रा बाट ल्याउन के स्मारिकाहरु? | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा सुझाव > यात्रा बाट ल्याउन के स्मारिकाहरु?
ट्रेन यात्रा चीन, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा रूस, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप, यात्रा सुझाव
के तपाइँ कहिल्यै लिनुभएको हरेक यात्रा याद गर्न सक्नुहुन्छ, दृश्यहरु तपाइँ प्रशंसा गर्नुभयो, र तपाइँले चाख्नुभएको खानाहरु? नहुन सक्छ, र यही कारण हो कि स्मारिकाहरु ती यादहरु लाई एक जीवनकाल अन्तिम बनाउन को लागी सही तरीका हो. यात्रा बाट कस्ता स्मृति चिन्ह ल्याउनु हुन्छ? यहाँ स्वर्ग को एक टुक्रा घर लाई फिर्ता ल्याउन को लागी सबै भन्दा राम्रो स्मारिका विचारहरु छन्.
एक यात्रा बाट ल्याउन स्मारिकाहरु: खाना पकाउने सामाग्री
मसला, चटनी, जडीबुटीहरु, तपाइँलाई फिर्ता स्वाद मा फिर्ता लिनुहुनेछ, सुगन्ध, र त्यो विशेष स्थान को क्षणहरु. यो प्रमाणित छ कि हामी हाम्रो इन्द्रियहरु को माध्यम बाट धेरै याद छ, र खाना एक ठाउँ को अनुभव गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका हो. यसबाहेक, खाना पकाउने अवयवहरु तपाइँको साथीहरु र परिवार लाई लाग्छ कि उनीहरु तपाइँ संग त्यहाँ छन्.
चिनियाँ जडीबुटी, पास्ता चटनी, र यहाँ सम्म कि पास्ता चीन को एक यात्रा बाट फिर्ता ल्याउन को लागी अद्भुत स्मृति चिन्ह हो, वा इटाली, उदाहरणका लागि. त्यसैले, केवल foodies को लागी एक अतिरिक्त झोला प्याक गर्न सम्झनुहोस्, किनकि यो राम्रो छ कि यी स्वादिष्ट स्मृति चिन्हहरु छुट्टै प्याक गर्न. तपाइँ सूटकेस खोल्न चाहानुहुन्न कि तपाइँको कपडा रातो पेपरिका रंगहरुमा छन् पत्ता लगाउन.
स्थानीय संस्कृति र कलाकारहरुलाई समर्थन गरीरहेको छ तपाइँ एक विचारशील र स्मार्ट यात्री हुनुहुन्छ. हातले चित्रित चटनी कटोरा, बुना टेबल कपडा, वा कढ़ाई फीता शर्ट शानदार स्मृति चिन्हहरु तपाइँको साथीहरु खजाना हुनेछन्, प्रयोग, र एक महान तरीका छ कि तपाइँ होस्ट गरेको समुदाय को लागी तपाइँको कृतज्ञता देखाउन को लागी.
स्थानीय कला यूरोप र चीन मा कुनै पनी यात्रा बाट फिर्ता ल्याउन को लागी एक सुन्दर स्मारिका हो. चीनमा, तपाइँ राम्रो भाग्य को लागी रातो लालटेन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, रूस बाट क Domovichok हस्तनिर्मित कि तपाइँको घर वा बियर मायालु काका वा भाइ को लागी प्राग बाट एक ठुलो बियर गिलास को रक्षा गर्दछ. कस्तो ठूलो सर्कल पर्यावरण-मैत्री यात्रा, प्राप्त गर्दै, र संसारभरि अद्भुत संस्कृति फैलाउँदै.
गृह सजावट स्मृति चिन्ह
तपाइँको यात्रा लाई तपाइँको घर को हिस्सा बनाउनुहोस्, एक सुन्दर फूल Delft फूलदान वा नेदरल्याण्ड बाट काठ ट्यूलिप संग. घर सजावट स्मृति चिन्ह हस्तनिर्मित हुन सक्छ, र प्रायः संस्कृति र आफ्नो उत्पत्ति को इतिहास को कथाहरु बताउनेछन्.
पर्खालमा सिरेमिक प्लेट, चेक गणतन्त्र बाट बोहेमियन क्रिस्टल, वा कोयल घडीहरु बाट कालो वन यूरोप को लागी तपाइँको यात्रा बाट घर ल्याउन महान स्मृति चिन्ह हो.
एक ट्रेन संग फ्लोरेन्स को लागी Rimini
रोम को लागी एक ट्रेन संग फ्लोरेंस
एक ट्रेन संग फ्लोरेंस को लागी पिसा
भेनिस एक ट्रेन संग फ्लोरेंस को लागी
एक यात्रा बाट ल्याउन स्मारिका: स्थानीय रक्सी
राम्रो रक्सी को एक गिलास मा यात्रा बाट कथाहरु साझा सबै रसदार विवरण मा याद दिलाउन मद्दत गर्दछ, र रमाईलो पलहरु. स्थानीय रक्सी लाने एक लोकप्रिय स्मारिका यूरोप बाट ल्याउन छ, विशेष गरी यदि यो एक हो मादक पेय सबै विश्वव्यापी प्रयास गर्नुपर्छ.
त्यसैले, Limoncello इटाली बाट, वा जर्मनी मा Rhein उपत्यका बाट Riesling शराब, या त बाटो, प्राप्तकर्ताहरु यस्तो उपहार प्राप्त गर्न उत्साहित हुनेछन्. यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि स्थानीय पेय के हो, रात को खाना को समयमा स्थानीय टेबल मा चश्मा ध्यान दिनुहोस् वा स्थानीय बार मा सोध्नुहोस्.
गहना एक आश्चर्यजनक तरीका मुटु को नजिकै तपाइँको यात्रा बोक्न को लागी हो. एक रमाईलो हार, पोल्याण्ड बाट एम्बर झुम्का, वा एक आकर्षक चाँदी आकर्षण कंगन, टुक्राहरु हुन् जुन कहिल्यै शैली बाट बाहिर जान्छन्, यसबाहेक, उनीहरु कालातीत छन्.
त्यसैले, यदि तपाइँ असाधारण स्मृति चिन्ह ल्याउन उत्सुक हुनुहुन्छ, तब गहना एकदम सही छ. प्रत्येक देश बाट तपाइँको कंगन को लागी एक आकर्षण जोड्ने यात्रा अद्भुत छ. तथापि, जब एक विदेशी देश मा गहना किन्न, नगद ह्यान्डलिंग को बारे मा सावधान रहनुहोस् र कुनै पनी मा गिरावट नगर्नुहोस् विश्वव्यापी लोकप्रिय यात्रा घोटाला.
Dijon एक ट्रेन को साथ प्रोवेन्स गर्न
एउटा आइटम उनीहरु स्कलन
कीचेन र पोस्टकार्ड बिर्सनुहोस्, यदि तपाइँका साथीहरु कलेक्टर हुन्, केहि पनि भन्छन् म एक अनौंठो टुक्रा भन्दा बढी उनीहरु आफ्नो संग्रह मा थप्न सक्छौं हेरचाह गर्दछु. सबैले केहि न केही स collect्कलन गर्छन्: प्राग बाट एक सजाइएको बियर मग, Murano गिलास मूर्तिकला, रूसी बाबुष्का पुतली को मूर्तिहरु को लागी, र यी केहि उदाहरण मात्र हुन्.
यसबाहेक, गोली चश्मा, टोपी, र पिन यूरोप को यात्रा बाट फिर्ता ल्याउन को लागी अर्को भयानक संग्रहणीय स्मारिका हो. भित्तामा झुण्डिएको, पार्टीहरुमा प्रयोग हुन्छ, वा एउटा एल्बम मा भण्डारण, तपाइँका साथीहरु समय को खजाना हुनेछ कि तपाइँ त्यो एक विशेष टुक्रा र यसको पछाडि कहानी को लागी बिताउनु भयो.
मीठो र रोचक व्यवहार एक मुस्कान मा राख्नुहुनेछ र श्रोताको ध्यान समात्नुहुनेछ. खाना एक ठाउँ को अनुभव गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका हो, सबै स्वादहरु को माध्यम बाट एक संस्कृति र कथाहरु को लागी यात्रा. उदाहरणका लागि, पेरिसियन Macarons मात्र स्वादिष्ट स्मृति चिन्ह होइनन्. उनीहरु अझै पनी आफ्नो पूर्णता मा फ्रेन्च पुनर्जागरण को सार र आत्मा कब्जा, उज्ज्वल र उत्तम फारम.
त्यसैले, जबकि केहि काट्ने यो स्मारिका गायब बनाउन, स्वाद र अचम्मको भावना सदाको लागी हामी संग रहनुहोस्. हाम्रा इन्द्रिय सधैं पहिलो पटक हामीले स्विस चकलेट कोसिस गरेका छौं सम्झना हुनेछ, र तपाइँको स्वादिष्ट स्मारिका को प्राप्तकर्ताहरु लाई पनि याद हुनेछ. सारांशमा भन्नुपर्दा, मीठो स्मारिकाहरु एक शानदार स्मारिका यूरोप को यात्रा बाट फिर्ता ल्याउन को लागी हो.
एक यात्रा बाट ल्याउन स्मारिकाहरु: वस्त्र
किनमेल विदेश मा गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो चीजहरु मध्ये एक हो. तपाइँ तपाइँको शैली परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, रूस बाट एक रंगीन परम्परागत दुपट्टा जस्तै आफ्नो अलमारी एक विशेष आइटम जोड्नुहोस्, इटाली बाट छाला को ज्याकेट, र अधिक. यदि तपाइँ तपाइँको साथीहरु लाई एक कपडा टुक्रा ल्याउने योजना बनाइरहनुभएको छ, तब तपाइँ आफ्नो शैली र पाठ्यक्रम को आकार थाहा हुनुपर्छ.
तथापि, त्यहाँ कपडा स्मारिकाहरु को धेरै यूरोप मा छनौट गर्न को लागी छन्, कि आकार चयन शामिल छैन. बर्लिन को लागी एकदम सही छ पुरानो किनमेल, लन्डन को सडक बजार बाट टी शर्ट, पेरिस वा इटाली बाट एक राम्रो टाई, दुनिया भर बाट ल्याउन को लागी मात्र केहि कपडा स्मृति चिन्ह विचार हो.
Cliche स्मृति चिन्ह युरोप बाट एक यात्रा बाट ल्याउन
तपाइँ क्लासिक स्मृति चिन्ह संग गलत कहिल्यै जान सक्नुहुन्न. उदाहरणका लागि, उपहार मित्र र परिवार एक एफिल टावर किचेन, रूसी काठ Matryoshka, वा एम्स्टर्डम बाट काठ clogs, यी एक प्यारा र विचारशील स्मारिका हुनेछ. यसबाहेक, तपाइँ एयरपोर्ट मा यी क्लासिक यूरोपीय स्मृति चिन्ह किन्न सक्नुहुन्छ, वा रेल स्टेशन, अन्तिम मिनेटमा. तथापि, ध्यानमा राख्नुहोस् कि स्मृति चिन्ह’ मूल्य धेरै रेलवे स्टेशन पसल मा हुनेछ, शहर मा भन्दा.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई यूरोप मा एक अविस्मरणीय यात्रा को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं. तपाइँ सजीलै यूरोप मा कुनै पनि गन्तव्य को लागी ट्रेन बाट यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, पसल र सजीलो यात्रा को खजाना र स्मृति चिन्हहरु को पूर्ण सूटकेस को आनन्द लिन्छन्.
के तपाइँ हाम्रो ब्लग पोस्ट एम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "एक यात्रा बाट ल्याउन को लागी स्मृति चिन्ह?"तपाइँको साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fsouvenirs-bring-trip%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
आकर्षक मेट्रो स्टेशन अनि भूमिगत कला
ट्रेन यात्रा स्वीडेन, यात्रा युरोप